ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: သောင်းဝင်းဗိုလ်ကို ကျနော် သိတယ်
သောင်းဝင်းဗိုလ်ကို ကျနော် သိတယ်
မနက် ၁၁ နာရီလောက်
မဲဆောက်က ဆရာမ မမိုးက
“ဆရာ ... မအေးမာရဲ့အဖေကြီး ဆုံးသွားပြီ” တဲ့
နားထဲမှာ ပျားတွေ ပျံဝဲသလို
ကျနော်တို့ ခေါ်တာက ဆရာစိန်ပေါ့
ဟိုး တိမ်တွေအပေါ်ကို သွားပြီ။
သူက ဆင်အကောင်တထောင် ဖမ်းပေးတယ်
သူ လွတ်တာက ကြွက်တကောင်မဟုတ်ဘူး
“သမီးဦး အေးမာ သူပုန်မနဲ့
သားအဖ စကားပြောကြလို့” တဲ့
မဲဆောက်မှာ သူ အခင်မင်ဆုံးသူတွေ
လှလှပပ သူရေးပြီး အသံလွှင့်ခဲ့
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 12:18 AM
Very active and sensitive poem for revolution.
Our revolution is not done yet.This poem is represented for all patriots.
Thankalot Ko Nyein Aye.
မောင်ငြိမ်းအေးဆိုတာ ရိုင်းမြစ်ကမ်းမှ မောင်းမကန်အိပ်မက် ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးရေးတဲ့ဆရာလားခင်ဗျာ